DRK133 အပူအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်စမ်းသပ်သူ - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Drick တူရိယာ
DRK133 အပူအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်စမ်းသပ်သူဆွေမျိုးစံချိန်စံညွှန်းများလိုအပ်ချက်အရသိရသည်လမိုင်းရုပ်ရှင်ပိတျထားသောစက္ကူများနှင့်အခြားအပူ coating, အခြေခံရုပ်ရှင်၏တံဆိပ်ခတ် parameters များကိုဆုံးဖြတ်ရန်လမိုင်းရုပ်ရှင်ဟာနမူနာတော်မူ၏။ တံဆိပ်ခတ် parameters တွေကိုအပူတံဆိပျကိုအပူချိန်, ၌ကျိန်းဝပ်အချိန်နှင့်အပူတံဆိပျ၏ဖိအားများပါဝင်သည်။ မတူညီတဲ့အရည်ပျော်မှတ်ရှိသည်သောအပူတံဆိပျပစ္စည်းများ, အပူတည်ငြိမ်မှု, အရည်နှင့်များ၏အထူသိသာကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပျကို technique ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အမျိုးမျိုးသောအပူတံဆိပျကိုဂုဏ်သတ္တိများပြနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ...
DRK133 အပူအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်စမ်းသပ်သူ seals the specimen to determine the seal parameters of basic film, laminated films, coating paper and other heat sealing laminated films according to the requirement of relative standards. The seal parameters include heat seal temperature, dwell time, and the pressure of heat seal. Heat seal materials that have different melting point, heat stability, fluidness, and thickness of could show various heat seal properties, which cause obviously different seal technique. Users can obtain standard and accurate heat seal index by DRK133 Heat Seal Tester.
micro-ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု; LCD display ကို;
Manu interface ကို, PVC စစ်ဆင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့;
လက်စွဲနှင့်ခြေလျင်နင်းနှစျယောကျစမ်းသပ်မှုစတင် mode ကို;
ပိုက် plug ကိုအပူ Rapid သွင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြာ;
ASTM F2029, QB / T က 2358 (ZBY 28004), YBB 00122003
စံ: Mainframe အတွက်, လုပ်ငန်းလည်ပတ်လက်စွဲစာအုပ်